Homeसमाचारहार्दिक बधाई ! रेखा थापाले समाजसेवी केटासँग लगनगाठोँ कस्दैँछिन् ?
March 21, 2021 admin समाचार 2719
रेखा थापाले समाजसेवी केटासँग लगन’गाठोँ कस्दैँछिन् ? अभिनेत्री रेखा थापा अहिले आफ्नो नयाँ चलचित्र निर्माणको तया’रीमा छिन् । यसै क्रममा चलचित्र बजारमा रेखाको बारे एउटा हल्लाले तरं’ग सिर्जना गरेको छ ।
छविराज ओझासँग डिभो’र्सपछि रेखा कसैसँग रिलेशनमा छैनन् । उनको लभ अफे’यरको बारे समेत खासै कुरा मिडियामा आएको छैन ।देतर, अहिले आएको हल्ला साँ चो हो भने रेखाले छि’ट्टै बिहे गर्दैछिन् ।
रेखाले चलचित्र क्षेत्रभन्दा थोरैबाहिरको तर समाजसेवामा क्रि’याशिल व्यक्तिसँग बिहे गर्ने रेखा निकट कतिपयले अ’नुमान गरेको बजारमा चर्चा छ । लामो समयसम्म एक’ल जिवन विताउन गाह्रो भएकाले अब रेखा बिहे गर्ने मुडमा रहेको बुझि’एको छ ।
तर, यी सबै बजारमा चलेका ग’सिप हुन् । यदि यो गसिप असाध्यै भरपर्दो हो भने रेखाले केहि वर्षभित्रै कसैको हातबाट सिन्दुर लगा’उनेछिन् । र नयाँ जीवनको सुरू’वात गर्नेछन् ।
यो पनि , ‘दर्पण छायाँपछि’ को पखा’ईमा निरुता
निरुता सिंहलाई हिटको ग्या’रेन्टी दिने अभिनेत्री भन्ने गरिन्थ्यो । पोस्टरमा उनको अनु’हार देखेको भरमा फिल्म हेर्न हलमा दर्शक झुम्मिन्थे । अझ भनौं, फिल्म चल्न उनको नामै काफी थियो । त्यसबेला हिरो बराबर स्टारडम बनाएकी उनले कयौं या’दगार फिल्म दिएकी छन् । तर, नेपाली फिल्ममा राम्रो माग हुँदा हुँदै उनी अचा’नक अभिनय छाडेर सुटुक्क मुम्बई हानिइन् ।
१२ वर्षपछि बगेको खोला फर्कि’न्छ भनेझैँ निरुता पनि १२ वर्षपछि ‘नाईं नभन्नू ल ५’ बाट अभिनयमा फर्किइन् । यसमा उनको भूमिका छोटो भए पनि दर्शक’ले रुचाए । यसपछि उनले हरिवंश आचार्यको श्रीमतीको भूमिकामा फिल्म ‘दाल भात तरकारी’ मा काम गरिन् । यो फिल्ममा लाउड अभिनयका कारण आ’लोचित भएकी उनले दुई वर्षदेखि नयाँ फिल्म साइन गरेकी छैनन् ।
अब उनी आफ्नो करि’अरको सबैभन्दा ब्लकबस्टर फिल्म ‘दर्पण छायाँ’ को सिक्वेल ‘दर्पण छायाँपछि’ मा काम गर्ने त’यारीमा छिन् । उनले यो फिल्मलाई आफ्नो वास्त’विक कमब्याक हुने बताएकी छन् । अभिनेता उत्तम प्रधानले क्याप्टेनसिप सम्हाल्न लागेको फिल्ममा उनीसँगै निरुता र दीलिप रायमाझीको मुख्य भूमिका रहनेछ । फिल्मको कथा पनि उत्तमले नै तयार पारे’का छन् ।
कोरोना महामा’रीका कारण फिल्मको छायांकन सुरु हुन नसकेको निरुताले बताएकी छन् । शनिवार नेफ्टा अवा’र्डमा फिल्मको बारेमा उनले भनिन्, ‘कोरोना नभएको भए फिल्मको छायांकन सुरु नै भइसक्थ्यो । नेपाल-भारत बोडर सिल भएका कारण, त्यो खुलेपछि छायांकन थाल्नेछौं ।’ ‘दर्पण छायाँ’ सकिएको कथादेखि नै सुरु हुने फिल्मलाई उत्तर र निरुताले मिलेर निर्मा’ण गर्दैछन् । – इताजा खबरबाट
May 15, 2021 admin समाचार 2013
June 3, 2021 admin समाचार 1165
September 15, 2020 admin समाचार 10429
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (193914)